Izindawo ze-Casino zase-Serbian Online Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(562 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ...Njengamanje, ukugembula eSerbia kulawulwa ngokuqinile. Ngemuva kwezimpi zase-Yugoslavia kwagcwala amakhasino angenamalayisense asebenza emakethe emnyama. Imizamo yokulawula le ndawo ekugcineni ayiphumelelanga. Ngo-2011, kwakukhona omunye wemithetho elawula kakhulu ukugembula emlandweni wezwe owenqabela ukungena kumasayithi angaphandle okugembula online.
Kusukela ngoJanuwari 2017 ukugembula okusemthethweni ezweni okufana nebhingo nebhingo, ukubheja kwezemidlalo, imidlalo yekhasino, i-poker nokugembula online. Imithetho yaseSerbia yokugembula inesici esisodwa sokuthi, ngokungafani nentela esesilinganisweni esingu-15% ekhokhwayo lapho abadlali bewina ukubheja kwezemidlalo ukuwina intela evela kumishini ye-poker noma ye-slot ngeke kukhokhiswe.
Ukugembula ku-inthanethi eSerbia
Ngaphambi kokuba amukelwe njengomthetho wezokugembula online eSerbia, le ndawo ayilawulwa ezweni. Kodwa-ke, ngemuva kokwamukelwa kwalo mthetho, ukugembula ku-inthanethi sekulinganiselwe impela. Angaphezulu kwama-70 amakhasi e-web ezinkampani zakwamanye amazwe avinjiwe. Manje zonke izinkampani ezifisa ukunikela ngezinsizakalo zazo kubadlali baseSerbia kumele zinikezwe ilayisense futhi zizinze ezweni. Ukuvimba amasayithi wokugembula akwamanye amazwe aku-inthanethi kususwe ukwakhiwa kwamasayithi endawo. Kodwa-ke, isiphakamiso abasinikezayo, namanje silinganiselwe.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 ze-Serbian Online ze-Casino
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseSerbia
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eSerbia, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela eSerbia.
Iziphathimandla zaseSerbia zithathe isinqumo sokulawula ngokuphelele imakethe yokudlala, esatshalaliswa nge-Intanethi. Lokhu kuzosiza uhulumeni wezwe ukulawula ukugeleza kwemali okuthe xaxa kwabantu bakubo. EYurophu, isihloko esisemthethweni sokugembula ku-inthanethi sithandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Amazwe amaningi e-Old World asevele ethathe izinyathelo ezifanayo, amanye amazwe ase-Europe alungiselela inhlabathi ngalo mthetho omusha. Kuyathakazelisa ukuthi inqubo yokubhaliswa ngokusemthethweni kwamakhasino aku-inthanethi e-European Union ibanjwa ngendlela ejwayelekile. Ekuqaleni, njengokungathi akukho ndawo kubasebenza endaweni kunobunzima obuhlukile, kwesinye isikhathi abunakunqotshwa. Lapho-ke iziphathimandla seziqala ukuxoxisana nabahlinzeki bemidlalo eku-inthanethi, bese zivele zisho izimo zabo. Okokugcina akusekho ukwenza ngaphandle kokuthatha imithetho yabanye abantu.
Ngendlela efanayo nodaba noHulumeni waseSerbia, ekufezekiseni ukuvinjelwa kwemisebenzi endaweni yayo yabasebenza ngaphezulu kwe-XNUMX bakwamanye amazwe online, ngenkathi beshiya i-lottery yombuso. Ngemuva kwalokho, iziphathimandla zaseSerbia zenze ikhomishini ekhethekile, okufanele icabangele yonke imisindo yokuthengiselana kwesikhathi esizayo.
Ngasikhathi sinye, imali engenayo abaqhubi bezokugembula baseFrance ne-Italy bayaqhubeka nokuwa. Kula mazwe ngonyaka we-2012 abebhaliswe ngokusemthethweni njengekhasino eku-inthanethi, manje angadlalwa asemthethweni ngokuphelele futhi aphephile. Kodwa-ke, izinkomba ezifana nentela yemali engenayo e-Italy naseFrance zikhule ngokuqinile, ukuze amakhasino aqale ukunikeza abasebenzisi izimo ezingaphansi kwezinhle. Ngokunjalo, ithrafikhi yehle kakhulu, imali engenayo yomkhakha wezokugembula online nayo yaqala ukuwa. Ngakho-ke, isizathu sokuqala sokwehluleka komthetho omusha akuyona inkinga yezezimali nezimo ezingezinhle zokusebenzela opharetha bendawo online.
Ibhizinisi lokugembula eSerbia
Ukugembula eSerbia kwaqala ukuthuthuka muva nje, lapho uhulumeni e2011 amukela imithetho eminingi edingekayo yokugembula. Kuze kube yileso sikhathi, yizikhungo ezimbalwa ezingekho emthethweni ezazisebenza ezweni elincane laseBalkan. Ngemuva kokwamukelwa komthetho omusha odingekayo wokuzibandakanya ebhizinisini lokugembula eSerbia kwenzeka kuphela ngemuva kokutholakala kwelayisense elifanele. Kumthethonqubo webhizinisi lokugembula eSerbia laqala ukuthuthuka. Namuhla, amakhasino nezindlu zokugembula zingaziqhayisa ngenani elikhulu lezivakashi kusihlwa futhi cishe azinalutho naphakathi nosuku. Kulolu hlobo lomsebenzi umbuso manje usukhiqiza ilayisense eningi. Amakhasino aseSerbia abeka utshalomali lwawo kwabosozigidi nosaziwayo abayizinkulungwane.
Izici zokugembula kuleli zwe
Yize uhulumeni waseBalkan wesifundazwe wavumela abasebenza kwamanye amazwe ukuthi baqalise ukugembula kuleliya lizwe, impi yokulwa nokugembula ngokungemthetho isaqhubeka. Lokhu ngukuthuthuka okuyinhloko okuyimboni yokugembula eSerbia. Ibhizinisi lokudlala laseSerbia namuhla libhekene nezinguquko ezinkulu ezinomthelela ekuthuthukisweni komnotho jikelele. Muva nje, uhulumeni uqale umkhankaso obanzi wokuqedwa kwabahlinzeki ngokungemthetho kwamakhasino aku-inthanethi. Ukudla izinkampani eziningi bekuvinjelwe. Kodwa-ke, iziphathimandla zikholelwa ukuthi lezi zinyathelo zizosiza ukufeza izinga elisha embonini yezemidlalo. Imboni yokugembula iya ngokuya ithandwa ezweni elisebenzayo.
Ikhasino ethandwa kakhulu futhi kanokusho yindawo yokudlela iGrand Casino Belgrad, etholakala eBelgrade. Izivakashi ezihlonyiswe ngamakamelo emidlalo ambalwa angahlalisa imishini edume kakhulu yama-slot, amatafula e-elekthronikhi kagesi namatafula okudlala izinhlobo ezahlukahlukene ze-poker. Kubantu be-VIP esikhungweni kukhona igumbi elihlukile, lapho izigxobo ziphakeme kakhulu. Le khasino inamatafula wokudlala angamashumi amabili nanhlanu. Ngokuphikisana nezikhungo zaseMontenegro, ikhasino linehhotela futhi aligxili ekugembuleni kuphela. Ukugembula kuphakathi kwabantu bendawo benjabulo ekhethekile. Amakilabhu amaningi okugembula anikeza izivakashi i-gaminator edumile, i-Blackjack, i-craps, i-roulette nezinhlobo eziningi ze-poker. Kepha namanje ukuthuthukiswa kwesimanje kwebhizinisi lokugembula ezweni kuhlose ukuheha abatshalizimali bamanye amazwe kanye nabavakashi bangaphandle.
I-nuances ye-casino e-intanethi
Namuhla, leli zwe leNhlonhlo yaseBalkan, iSerbia alithandwa kakhulu ngabantu bakwamanye amazwe. Intshisekelo yomphakathi igxile ekwanelisekeni komsebenzi wezenhlalo futhi cishe akunandaba nokubheja. Umbuso usazama ukulawula ngokuqinile izikhungo zokugembula. Imboni yezokugembula ezweni isesekuqaleni nje komsebenzi wakhe. Kodwa-ke, uhulumeni wezwe unesifiso sokuxazulula izinkinga eziningi zokugembula. Njengoba ibhizinisi lokugembula ezweni lisesigabeni sentuthuko nezengezo eSerbia ezitholakala kumakhasino aku-inthanethi. Noma kunjalo, kunezinkinga eziningi. I-Trade Association yaseSerbia isikhathi esingaphezu konyaka ivimba ukufinyelela ko-opharetha bangaphandle. Ngasikhathi sinye amalungu enhlangano enza ukuhlaziywa kwemininingwane ngemakethe yokugembula yenhlonhlo yaseBalkan futhi, ikakhulukazi, iSerbia. Ngenxa yomthetho wawo wokugembula kuze kube muva nje ubungekho ezweni, uMbuso wahlupheka kakhulu futhi usaqhubeka nokuhlupheka ngenxa yezenzo ezingekho emthethweni zamakhasino namakhasino aku-inthanethi. Umthetho omusha usavumela abadlali ukuthi badlale ngokukhululeka amakhasino aku-inthanethi ngaphandle kokubhaliswa. Abaqhubi bamakhasino babala intela edingekayo kumgcinimafa wombuso. Umthetho omusha wokugembula uvunyelwe ngokuphelele ukwakha isisekelo sentela esisodwa futhi kuqashwe ngokushesha ukusebenza okuqhubekayo - ukuthengiselana phakathi kwabasebenza naphakathi kwabadlali. Namuhla, inhloso enkulu yokugembula kwaseSerbia ukungathathi hlangothi ngokuphelele ekugembuleni okungekho emthethweni, ezweni nase-Intanethi. Vele, iSerbia kufanele ifinyelele ezingeni lamanye amazwe aseBalkan embonini yezemidlalo.
0.1 Ukugembula ku-inthanethi eSerbia
0.2 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 ze-Serbian Online ze-Casino
2.1 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseSerbia
3 Ibhizinisi lokugembula eSerbia
3.1 Izici zokugembula kuleli zwe
3.2 Iphuzu legeyimu
3.3 I-nuances ye-casino e-intanethi